Hogaamiyaha ruuxiga Iiraan oo difaacay 'militariga Iiraan' - Somali
Hogaamiyaha ruuxiga Iiraan oo difaacay 'militariga Iiraan'
Wiil bartay aqoon caafimaad oo Soomaalida ku yar
Jarmalka oo xal diblumaasiyadeed u raadinayo colaadda Libya
Posted at 13:20 17 Jannaayo 202013:20 17 Jannaayo 2020
Video caption: Dhibaatooyinka ay horseedeen Isbadelada cimiladaDhibaatooyinka ay horseedeen Isbadelada cimilada
Posted at 11:57 17 Jannaayo 202011:57 17 Jannaayo 2020
Hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan, Aayatullaah Cali KhameneiImage caption: Hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan, Aayatullaah Cali Khamenei
Hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan, Aayatullaah Cali Khamenei ayaa difaacay militariga dalkaas kaddib markii dhawaan xukuumadda Tehran ayaa qiratay in diyaaraddii rakaabka ee Ukraine aan si ula kac aheyn loo soo riday.
Wuxuu sheegay in ciidammadii Kacaanka ee ka dambeeyay masiibadaas ay 'ilaaliyeen ammniga Iiraan'
Aayatullah ayaa maanta salaadda jimcaha dadweyne ku tujiyay gudaha magaalada caasimadda ah ee Tehran markii ugu horreysay muddo siddeed sanno ah.
"Malaayin Iraaniyiin ah iyo kumanaan Ciraaqiyiin ah ayaa u baroordiiqay dilkii Janaraal Suleymaan" ayuu yiri Aayatullaah Cali Khamenei.
Posted at 9:00 17 Jannaayo 20209:00 17 Jannaayo 2020
Maxamed Nuur Gacal , guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka GalmudugImage caption: Maxamed Nuur Gacal , guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Galmudug
Waxaa hadda lagu dhawaaqay natiijada doorashada guddoonka baarlamaanka maamulka Galmudug oo hadda lasoo gabagabeeyay tirinta codadka.
Waxaana ku guuleystay xildhibaan Maxamed Nuur Gacal oo helay codad gaarayo 54 cod halka Cabdinaasir Aadan Cismaan uu helay 34 cod.
Waxaa hadda lagu dhawaaqay in Dr Maxamed Nuur Gacal uu yahay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulka Galmudug.
Posted at 8:42 17 Jannaayo 20208:42 17 Jannaayo 2020
Tirinta codadka doorashada guddoonka baarlamaanka Galmudug oo hadda socota
Waxaa hadda si rasmi ah u bilaabatay tirinta codadka doorashada guddoonka baarlamaanka Galmudug oo ay ku kala tartamayaan Cabdinaasir Aadan Cismaan iyo Maxamed Nuur Gacal.
Waxaana goordhaw lagu wadaa in natiijada shaaca laga qaado.
Posted at 7:59 17 Jannaayo 20207:59 17 Jannaayo 2020
Doorashada guddoonka baarlamaanka Galmudug oo bilaabatay
Magaalada Dhuusamareeb waxaa si rasmi ah hadda uga bilaabatay codeynta doorashada guddoonka baarlamaanka maamulka Galmudug.
Xidhibaanada ayaa hadda dooranaya guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaas.
Waxaana ku kala tartamaya jagada guddoonka baarlamaanka xildhibaanada kala ah, Maxamed Nuur Gacal iyo xildhibaan Cabdinaasir Aadan Cismaan.
Waxaa la filaya in lagu dhawaaqo natiijada marka lasoo gabagabeeyo codeynta.
Posted at 7:02 17 Jannaayo 20207:02 17 Jannaayo 2020
Aaayatulaah oo markii ugu horreysay muddo 8 sano ah tujinaya salaadda Jimcaha
Hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Aayatullah Cali Khamenei ayaa maanta salaadda jimcaha dadweyne ku tujinaya misaajid ku yaal caasimadda Iiraan ee Tehran.
Waa markii ugu horreysay muddo siddeed sanno ah uu hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan uu dadweynaha dalkaas tujiyo salaadda jimcaha.
Waxay arrintani imaaneysaa xilli ay jirto carada ka dhalatay diyaaraddii Ukraine laga laha ay militariga Iiraan soo rideen toddobaadkii lasoo dhaafay.
Hoggaanka waxaa soo wajahay cadaadis xooggan oo ka dhashay dhaqaale xumida kaddib cunaqabateynta Mareykanka ee kusoo rogay Iiraan.
Arbacadii, madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani wuxuu shacabka dalkaas ka codsaday inay midnimada ku dadaalaan.
Ruuxaan ayaa sidoo kale militariga ugu baaqay inay sharraxaad ka bixiyaan dhacdada lagu soo riday diyaaraddii rakaabka ee Ukraine.
Posted at 12:03 16 Jannaayo 202012:03 16 Jannaayo 2020
Shirkadda diyaaradaha Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday inay bilaabeyso dhismaha garoon cusub oo ay ku kaceyso ilaa 5 Bilyan oo doolar.
Waxay sheegtay in garoonka laga dhisayo duleedka magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa lagu dhameystirayo muddo lix bilood gudahood.
Garoonkan cusub ayaa qaadi doonaa 100 Malyan oo rakaab ah sannadkiiba, sida laga soo xigtay madaxa fullinta ee shirkadda diyaaradaha ee Itoobiya.
Wuxuu garoonka ku fadhin doonaa 35 kiiloomiitar oo dhul isku wareeg ah gudaha magaalada Bishoftu oo dhacda koonfur bari Addis Ababa.
Posted at 11:30 16 Jannaayo 202011:30 16 Jannaayo 2020
Wasiir Beyle :Adduunka dad deyn lagu yeesho anaga ugumana horeyn
Posted at 11:24 16 Jannaayo 202011:24 16 Jannaayo 2020
Wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Heiko MaasImage caption: Wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Heiko Maas
Wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka, Heiko Maas ayaa lagu wadaa inuu wadahadallo kula yeesho magaalada Banqazi, Janaraal Khaliifa Haftar.
Maas oo toddobaadkii hore la hadlay ra'iisul wasaaraha Libya Fayez Al Siraaj ayaa maanta wadahadalladan u matalaya Midowga Yurub ka hor shirka la filayo in maalmaha soo socdo lagu qabto magaalada Berlin si xal waaro loogu helo colaadda ka taagan Libya.
Janaraal Khalifa Xaftar kaas oo xoogaggiisa ay dagaal adag kula jiraan dowladda ay Qaramada Midoobeey taageereyso ee caasimadda dalkaas, wuxuu dhawaan tagay magaalada Moscow isagoo aan saxiixin heshiiska xabad joojinta, sida ay warbaahinta sheegeen.
Waxaa uu ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamayo Libya in xal diblumaasiyadeed ay u raadiyaan joojinta dagaallada.
Posted at 9:07 16 Jannaayo 20209:07 16 Jannaayo 2020
Ismaaciil Axmed Maxamed wuxuu ku takhasusay cilimiga neerfaha, seedaha iyo xubanaha jirka (Daaweynta muuqata ee jirka), wuxuu ka sheekeynayaa waxa ku kalifay inuu barto cilmigan.
Video caption: Wiil bartay aqoon caafimaad oo Soomaalida ku yarWiil bartay aqoon caafimaad oo Soomaalida ku yar
Posted at 8:31 16 Jannaayo 20208:31 16 Jannaayo 2020
Posted at 7:00 16 Jannaayo 20207:00 16 Jannaayo 2020
Saraakiisha ammaanka dalka Sucuudiga ayaa sheegay inay xireen tiro dad ah oo lagu eedeeyay in xayawaanka Harmacadka ay si sharci darro ah uga ganacsanayeen isla markaasna ay u dhoofinayeen dalkaas.
Dadkan ayaa lagu eedeeyay inay wadeen ka ganacsiga xayawaanada duurjoogta gaar ahaan Harmacadka.
Warbaahinta gudaha ee Sucuudiga ayaa ku warrantay in raggan safrinayay Harmacadka ay kasoo tallaabeen xadka uu dalkaas uu la wadaago Yemen.
Saraakiisha ammaanka waxay qabteen raggan xilli ay jawaanno kusoo dhex qariyeen Harmacadka, kaddib waxay saraakiisha fureen jawaannada, waxay ku arkeen Harmacadka.
Qaar kamid ah xayaawanada duur joogta ayaa laga safriyaa dalalka bariga Afrika si looga iibiyo dalal ku yaal khaliijka halkaas oo lagu xannaaneysto.
Dadka u doodo ilaalinta duur joogta ayaa sheegay in badan oo kam id ah xayaawanada duur joogta la safriyo ay dhexda ku dhintaan isla markaasna waxay ka digeen in ganacsigan sharci darrada ah uu halis ku hayo Haramacadka ku nool dalalka sida Soomaaliya iyo Itoobiya.
Posted at 13:40 15 Jannaayo 202013:40 15 Jannaayo 2020
Somaliland oo xukun dil ah ku ridday lix qof
Xukuumadda iskeed ugu dhawaaqday Madaxbaanida ee Somaliland ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay lix qof oo muddo u xirnaa dad la sheegay inay horay u dileen.
Dilkan toogashada ah oo ka dhacay xabsiga Mandheera, raggan ayaa markii hore ku xirnaa xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa.
Waxaan arrintaas ka waraysanay Sadiiq Maxamed Burmad, weriyaha BBC-da ee Hargeysa.
Posted at 12:33 15 Jannaayo 202012:33 15 Jannaayo 2020
Jeel Ogadeen: Dadka "lama socdaan dacwadda lagu oogay eedeysanayaasha"
Jeel OgaadeenImage caption: Jeel Ogaadeen
Ha'yadda Human Rights Watch ayaa warbixin kasoo saartay xaaladda xuquuqul insaanka ee dalka Itoobiya gaar ahaan dhacdooyinkii waaweyn ee ka dhacay gobollada qaar ee dalkaas oo uu kamid yahay gobolka Soomaalida.
Ha'yadda ayaa sidoo kale sheegtay in horumaro badan aan laga gaarin arrinta ah in lala xisaabtamo dadkii horey tacaddiyada uga geystay Itoobiya si caddaalladda loo horkeeno.
Posted at 11:10 15 Jannaayo 202011:10 15 Jannaayo 2020
"Sharciga TPS waa waxa dhan aan waddanka ku joogno, waan ku shaqeysannaa....waxaana rajeyneynaa inay inoo ogolaadaan oo ay codkayagii aan dhiibannay wax inoogu qabtaan" ayay tiri Xaliima.
Posted at 9:18 15 Jannaayo 20209:18 15 Jannaayo 2020
Guddiga doorashooyinka Itoobiya oo soo jeediyay waqtiga la qabanayo doorashada guud
Sawir hore (Doorashadii ka dhacday Dowlad Deegaanka Soomaalida sannadkii 2015)Image caption: Sawir hore (Doorashadii ka dhacday Dowlad Deegaanka Soomaalida sannadkii 2015)
Guddiga doorashooyinka dalka Itoobiya ayaa soo jeediyay in 16-ka bisha Agoosto ee sannadkan la qabto doorashada guud ee la filayo in dalkaas ay ka dhacdo.
Waxay sidoo kale guddiga soo saareen jadwalka doorashada oo qabyo ah kaas oo muujinayo in 7-da bisha Apriil ay bilaabaneyso xilligga la diiwaan gelinayo codbixiyaasha.
Waxaa jiray baaqyo kasoo baxayay qaar kamid ah xisbiyada siyaasadda ee dalka Itoobiya kuwaas oo ku baaqayay in dib loo dhigo doorashada ilaa sannadka dambe.
Doorashada Itoobiya ayaa 5 shano hal mar la qabtaa balse ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa dhawaan sheegay in muhiim ay tahay in doorashada la qabto xilliggii la qorsheeyay.
Posted at 8:20 15 Jannaayo 20208:20 15 Jannaayo 2020
Allen Kenitzer, oo ah afahayeen u hadlay maamulka hawada federaalka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay "in maamulka hawada ay si qotodheer u baarayaan dhacdadaas isla markaasna ay jiraan qaabab gaar ah oo ay diyaaradaha shidaalka u qubi karaan marka ay hawada marayaan.
"Qaababkaas waxay yihiin in diyaaradaha ay shidaalka ku sii deyn karaan hawada gaar ahaan deegaanno loogu talagalay oo aysan dadka daganeyn, gaar ahaan hawada sare" ayuu yiri Allen Kenitzer.
Posted at 13:48 14 Jannaayo 202013:48 14 Jannaayo 2020
Al Shabaab oo dib u qabsatay Tooratoorow
Ciidammada dowladda Soomaaliya ayaa shaley gaaray deegaanka TooratoorowImage caption: Ciidammada dowladda Soomaaliya ayaa shaley gaaray deegaanka Tooratoorow
Wararka laga helayo deegaanka Tooratoorow ee gobolka Shabeellaha hoose ayaa sheegaya in xooggaga Al-Shabaab ay dib u qabsadeen kadib markii ay shalay halkaa gaareen ciidammada sida gaarka ah u tababaran ee Soomaaliya.
Ismaaciil Mukhtaar Cumar oo u hadlay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya ayaa sheegay in hawlgalka shalay uu ahaa mid qorsheysan oo ay ciidanku ku bartilmaameedsadeen xarumaha garsoorka ee Shabaab.
Wuxuu sheegay in ciidammada markii ay howlgalka kasoo fuliyeen ay dib ugu soo laabteen saldhigyadii ay markii hore ka baxeen.
"Ciidammada wey tageen, howlgal qorsheysan ayay ka sameeyeen, howlgalkaas qorsheysan ujeeddadii laga lahaa waa lagu guuleystay. Ciidammada waxay kusoo laabteen halkii ay ka baxeen" ayuu yiri Ismaaciil Mukhtaar Cumar oo u hadlay wasaaradda warfaafinta.
Posted at 12:51 14 Jannaayo 202012:51 14 Jannaayo 2020
Dalalka reer Yurub oo soo bandhigay farsamo lagu xallin karo muranka nukliyeerka Iiraan
Iiraan waxay sheegtay inay hakisay u hogaansamidda heshiiska iyadoo uga falcelineyso cunaqabateynta MareykankaImage caption: Iiraan waxay sheegtay inay hakisay u hogaansamidda heshiiska iyadoo uga falcelineyso cunaqabateynta Mareykanka
Dalalka kala ah Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa sheegay inay bilaabeen hannaan rasmi ah oo xal loogu raadinayo xadgudubka ay Iiraan ku sameysay heshiiska caalamiga ah ee Nukilyerka.
Saddexdan waddan ayaa sheegay in meel ka dhaca lagu sameeyay heshiiskaas, ee looga hortaggayay bacriminta Nukliyerka Iiraan isla markaasna ay waayeen tallaabo kale.
Balse waxay dalalka ku rajo weyn yihiin in kala aragti duwanaanshaha ku aadan heshiiska lagu xalin karo qaab farsamo oo wanaagsan balse haddii ay taasi guuldareysato in dalalka reer Yurub ay cunaqabateyn kusoo rogi karaan Iiraan.
Arrintan ayaa imaaneysa xilli Iiraan ay sheegtay inay hakineyso fulitaanka heshiiska Nukliyerka taas oo ay jawaab uga dhigeyso cunaqabateynta uu kusoo rogay Mareykanka.
Posted at 12:03 14 Jannaayo 202012:03 14 Jannaayo 2020
Dad Youtube isticmaalo oo loo heysto xuquuqda sawirkan
RM VIDEOSCopyright: RM VIDEOS
Sawirkan ayaa kamid ah muuqaallada loo heystoImage caption: Sawirkan ayaa kamid ah muuqaallada loo heysto
Labo qof oo kamid ah dadka muuqaalada geliyo barta Youtube ayaa loo heystaa xuquuqda muuqaallo ay geliyeen bartooda Youtube-ga.
Shakhsiyaadkan ayaa lagu amray inay bixiyaan ilaa 6,000 oo doolar ama in hawada laga saari doono bartooda.
Baraha kala ah MxR iyo Potastic Panda waxay ku caan baxeen inay soo bandhigaan muuqaallo kala duwan oo khuseeyo dhacdooyinka marka taagan.
Waxaana lagu heystaa inay jebiyeen xuquuqda lahaanshaha muuqaallada iyo sawirrada.
Waxaana loogu hajabay in hawada laga saari doono tan iyo inta ay ka bixinayaan lacagta ganaaxa ah.